Sidee caruuraheenna ugu dhiiragelin karnaa ineeysan been u sheegin waalidka? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sidee caruuraheenna ugu dhiiragelin karnaa ineeysan been u sheegin waalidka?
Sidee caruuraheenna ugu dhiiragelin karnaa ineeysan been u sheegin waalidka?
Beenta waxay ay ka mid tahay waxyaabaha ay diinteenu Islaamka reebtay in lugu dhaqmo, saas oo ay tahayna beenta waxaa mid ayadeegsato cid kasta, waana mid sidoo kale aan laheyn yaraan iyo weeynaan ama xilli iyo waqti kasta.
Dhamaanteenna waxaan jecelnahay in aynu aragno carruuraheenna oo raacaya dhaqamada wanaagsan ee ay diintu na fareeyso. Haddaba qormadan ayaan wax kaga eegeeynaa mowduuc aan u aragno inuu ahmiyad u leeyahay bulshadda gaar ahaan carruurteenna. Moowcduucaan oo aannu misna isleenahay waa mid waallidku adeegsan karo si uu uga hortago in carruurto ku dhiirato ineey been sheegaan.
Hooyo wiil ay hooyaddii waanineeyso. Sawirka: AP
Kolka ilmahaaga kuu sheego arrin ay caddahay inay been tahay ha ku deg-degin inaad beeniso ama u diido inuu sii wado hadalka, ee u kaadi inta uu dhamaysanayo kadibna isku day in khayaaligan maskaxdiisa ku jira aad u bedesho mid dhab ah.
Adiga oo waydiinaya su’aalo xaqiiq ah, tusaale ahaan hadii uu kuu sheegay inuu tagay meel ay adag tahay in la tago oo aanan la rumaysan karayn isku day inaad waydiiso inuu ka sheekeeyo goobtaas sida ay u egtahay iyo haday jirto asxaab ay israaceen iyo su’aalo kale oo ay ku adag tahay inuu u helo jawaab fudud.
Taas oo ku khasbaysa marka ay wado waliba ka xiranto adigana su’aaluhu wali kuu buuxaan in uu iska qirto runtana afka soo mariyo maadaama uuna dareemayn cadaadis iyo baqdin arrintuna ay isku bedeshay sheeko werin. Arrintan sidoo kale waxa ay qayb wayn ka qaadanaysaa dhismaha mustaqbalka ilmahan yar oo tababar ayay u tahay sidii uu ugu heli lahaa wado iyo xal wax yaabo badan oo ubaahan wax ka badan HAA iyo MAYA.
Ha buun-buunin beenta
Ha ku qasbin ilmahaagu inuu miciinsado beenta isaga oo ka baqayo ciqaabtaada, ha waynayn arrimaha yar-yar, tusaale ahaan hadii uu jabiyo koob ama wax lamid ah ha canaanan ee si fudud u waydii sida wax u dheceen hadii uu run kuu sheegan abaal mari, taasi waxa ay ku dhiiri galinaysaa inuu run sheego mar walba si loo abaal mariyo.
Sidee u ciqaabeeysa hadduu been bato?
Hadii uu gaadho heerka beena-hawaas, u yara hanjab adiga oo taasna aana ka badbadinayn, waxay noqon kartaa ciqaabtani in meel aad ku ballansanaydeen inaad tagtaan baajiso adiga oo sababtana u sheegaya. Taasi waxa ay ku khas-baysaa inuu run sheego si uu u helo waxa aad u diiday. ha fulin ciqaabta aad u balan qaaday marka qaabkan samayso ma aadan cafin. Wixii intaa ka danbaysana waxaa laga yaabaa inuu beenta u arko mid kala dheeraynaysa isaga iyo wax yaabaha uu jecel yahay inuu waalidkii ka helo.
La sheekayso hana dareensiin inuu dembi galay
Ilmahaaga la sheekayso taasi waxa ay ka masaxaysaa amaradii iyo hanjabaadihii aad bixinaysay, wuxuuna kuu tix gelin doonaa saaxiibkiisa uu jecelyahay inuu u sheego waxa ka guuxaya maskaxdiisa. Hadii uu khaldamo ilmahaagu ha liidin hana ku cel-celin inuu denbi galay uuna xun yahay ama xumaan sameeyey, taasi waxa ay ku khasbaysaa inuu been sheego si’uu denbigaa uga baxo.
Hadaba daraasad uu sameeyey machad ku yaala Columbia ayaa sheegay in 90% waalidiinta u sheega caruurtooda inay yihiin kuwa wanaagsan oo fariido ah ay caruurtooda ka mustaqbal fiicnaadaan kuwa waalidkooda dhagahooda ku badiyaan canaanta aan salka lahayn iyo ku cel-celinta xumaantooda iyaga oo iska indha tiraya wanaagoodda.
Waxaa qoray, Xamsa Ceydiid